Basikety – CCCOI 2017 : Tafita amin’ny manasa-dalana ny Ascut Mada -
AccueilSongandinaBasikety – CCCOI 2017 : Tafita amin’ny manasa-dalana ny Ascut Mada
Manohy ny lalany hatrany ny Ascut (Madagasikara) eo amin’ny fiadiana ny “Coupe des Clubs Champions de l’Océan Indien”, na CCCOI 2017 eo amin’ny taranja basikety, sokajy lehilahy sy vehivavy. Fifaninanana tanterahina, amin’izao fotoana izao, eto Madagasikara, etsy amin’ny Lapan’ny Fanatanjahantena Mahamasina.
Voahaja mantsy ny lôjika teo amin’ny lalao ampahefa-dalana, izay nahafahan’ny Ascut niakatra amin’ny dingan’ny manasa-dalana anio. Izany hoe, nivoaka ho mpandresy nanoloana ny Premium Cobra (Seychelles) tamin’ny isa mavesatra, 74 noho 41, teo amin’ny ampahefa-dalana izy ireo. Raha ny fizotry ny fihaonana omaly teo amin’ny ampahefa-dalana, dia nataon’ny Ascut tsy nisotro rano nanomboka teo amin’ny ampahefa-potoana voalohany hatrany amin’ny ampahefa-potoana fahefatra farany ny Premium Cobra tamin’izany. Nitarika hatrany am-boalohany mantsy ny Ascut, ary nanenjika hatrany ny mpifanandrina taminy saingy tsy tafavoaka mihitsy. Nampiseho ny fahaizany ny Ascut nanoloana ny Premium Cobra, ary toa ny nanao fanazaran-tena mihitsy aza ity ekipa anisan’ny miaro ny voninahi-pirenena amin’ny fiadiana ny CCCOI 2017 ity.
Noho izany, ny BCM Mayotte indray no mpifanandrina amin’ny Ascut eo amin’ny manasa-dalana anio. Hiady tanteraka ny fihaonana satria anisan’ny ekipa vahiny manana ny maha izy azy ny BCM Mayotte, izay efa nandresy ny GNBC (Madagasikara) tany amin’ny fifanintsanana isam-bondrona. Mila miady mafy noho izany ny Ascut eo amin’io manasa-dalana io.
Ankoatra izay, nomontsanin’ny GNBC tamin’ny isa mazava, 104 noho 71, ihany koa ny Real Basketball (Maorisy) teo amin’ny ampahefa-dalana ilany. Iray amin’ny Beau Vallon (Seychelles) sy ny Cospn (Madagasikara) kosa no hikatroka amin’ity ekipan’ny zandary ity eo amin’ny manasa-dalana.